Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola laseWales I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso "Tarzan". Indaba yethu ye-Gareth Bale Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi amandla akhe, Ukusheshisa nokunemba. Kodwa-ke, bambalwa nje abheka i-Biography ye-Gareth Bale eyithakazelisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Isendlalelo sokuqala nokuphila komndeni
UGareth Frank Bale wazalwa ngosuku lwe-16th kaJulayi 1989 eCardiff, inhloko-dolobha yaseWales, e-United Kingdom. UBale wazalelwa unina uDebiebie (umphathi wendawo) kanye nobaba wakhe uFrank bale (umqaphi esikoleni sendawo).
Ngokuphathelene nezimpande zakhe, uBale uyisizwe saseWalsh nesizwe saseNgilandi nesiWelsh. Ubuhlanga besiNgisi bukhawulelwe ngokuthi ugogo wakhe omama wazalelwa eNgilandi.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- I-Education ne-Career Buildup
U-Young Bale wakhulela eCardiff eceleni nodadewabo omdala uVicky. Wayenesithakazelo kweBhola kusukela esemncane futhi wakhuthaza izithakazelo zakhe I-Whitchurch High School lapho eyaziwa khona ukuthi ube ngumdlali ozithandayo wesikole.
Ngaphandle kokudlala ibhola, uBale ubambe iqhaza e-hockey, i-rugby nezinye izenzakalo zezemidlalo. Kodwa-ke, kwakuyikhono lakhe lebhola elibambe iqhaza kubalimi abakhulu abandakanya iNingizimuhampton.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Lapho ephothula esikoleni esiphakeme e-2005, uSouthampton wabhala iBale eqenjini layo. Kwakuyiqembu lapho isikhulu se-16 ngaleso sikhathi sabeka khona-saqala umsebenzi wakhe wezobuchwepheshe futhi saziwa ngokuba ngumchwepheshe wokukhahlela mahhala.
UBale wathuthela eTottenham Hotspur ku-2007, ngemali eyi-£ 7 yezigidi. Phakathi nesikhathi sakhe e-Tottenham, ukuthutha kwezokuphatha nokuqondisa kwambona waguqula waba umdlali ohlasela kakhulu. Kusukela ezinkathini ze-2009-10, ngaphansi kokuqondiswa kukaHarry Redknapp, uBale waba yingxenye ebalulekile yeqembu, ekhuphukela emhlabeni jikelele ngesikhathi se-2010 / 11 UEFA Champions League.
Ku-2013 wabizwa ngokuthi i-PFA Players 'Player of the Year. Kamuva wabizwa eqenjini le-UEFA lonyaka. Ngaphezu kwalokhu okushiwo ngenhla, uBale wabizwa ngokuthi uPFA Young Player of the Year kanye neFWA Footballer of the Year 2013.
Ngenxa yalokho, wafunwa amaqembu amaningi aphezulu ahlanganisa i-Real Madrid eyaphumelela ukuthola imisebenzi yakhe. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
U-Gareth Bale uthathe intombi yakhe, u-Emma Rhys-Jones. U-Emma wakhuliswa eLlanishen, eCardiff, ngamamitha amabili ukusuka kwendlu yangaphambili yomkhandlu lapho uGareth akhule khona.
Lo mbhangqwana wawungumnandi wesikole esikoleni esiphakeme owaqala ukuthandana njengentsha. Eminyakeni eyalandela, uBale wamemezela ukuthi u-Emma Rhys-Jones wayebandakanyeka ngesikhathi egujwa ngosuku lwakhe lokuzalwa lwe-27th.
Umndeni okwamanje ubusisiwe ngezingane ezintathu. Ingane yabo yokuqala, u-Alba Violet, wazalwa eCardiff ngo-Okthoba 2012. Babenenye indodakazi, uNava Valentine, ngoMashi kulesi 2016. Ngo-2018, lo mbhangqwana wamukela ingane yabo yesithathu u-Axel Charles Bale, owazalwa ngo-8th ka-May 2018.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Izinwele nokuguqulwa kobuso.
Imali kaGareth Bale ayizange ibe yinto efanayo kusukela esayina ukuthengiswa kwerekhodi ye $ 132 million ne Real Madrid ku-2013. Imali engaphezulu yayho ukuthi wayengakwazi ukukhokhela noma yikuphi imali engayikhokhela ukufaka phakathi nokuhlinzwa ukuze abe ne-flappy yakhe efana neyindlebe ekhonjiwe emuva.
Amacebo aqhubekayo nokufakelwa izinwele okuphelele kwe-Welsh emva kokukhanda kwakhe kwe-Man Bun ngehluleka ukumboza ubude bakhe.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ama-namnameki
I-Gareth Bale inezimpawu zomculo ezivelele ezimbili. Zihlanganisa "i-Tarzan" ne-"Canon". I-Bale yayingu-Okthoba i-2016 okuthiwa "iTarzan" phakathi ne-Wales 1-1 edweba ne-Georgia. Ngesikhathi lo mdlalo uqhutshwa u-Bale's bun-unfurled ngokumangaza ngokumangalisayo izinwele ezinde ezahlehla ngaphesheya kwamahlombe akhe.
Uyaziwa nangokuthi 'I-Cannon' ngenxa yezingqimba ezinamandla ezenziwa ngonyawo lwakhe lwesokunxele.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuxhaswa Nezimali
UBale ungomunye wabalandeli abambalwa abanezinhlelo eziningi zokuxhasa. Abaxhasi bakhe bahlanganisa i-sport enkulu - i-Adidas, umdlalo wevidiyo - i-Konami, isitolo sesitimela - i-Foot Locker, umakhi wezimoto - inkampani ye-Nissan ne-Electronics - i-Sony.
Ezinye zibandakanya amadili akhe ngeZiphuzo Zamandla - uLucozade, Iziteshi Zokubhalisela - BT Sport, Usizo Lokuqeqesha - I-Altitude Mask, inkampani yezemidlalo ye-EA Sports ne-Mattress Maker Simba Sleep. Mayelana nokutshalwa kwezimali kwakhe, uBale unomnikazi we-Elevens Bar ne-Grill eCardiff. Isiqunto sakhe sokuvikela ngokomthetho ukugubha isandla sakhe ekulandiseni kuthiwa sitholakale nge-£ 10m ngonyaka.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso okuphila komuntu siqu
UBale ungumdlali onobuciko obonisa ukuthi ungobugovu kuye kuye kwaba mnandi. Uthanda ukuphila impilo egcwele futhi angalokothi abe namahloni ekunakekeleni umndeni wakhe futhi afinyelele emncintiswaneni encane ngokubambisana. Ehlangothini lwe-flip yobuntu bakhe, uBale wayengase abe moody futhi evikela unina kakhulu.
I-Gareth Bale Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Okunye Amaqiniso Okuphila
UGareth Bale unenwele ensundu neliso elihlaza okwesibhakabhaka. Ngesinye isikhathi wayenomthelela we-ankle owonakele ngesikhathi ukunqoba kwe-Real Madrid nge-Sporting CP ku-Champions League, intuthuko eyenza ukuthi engekho ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu.
I-Bale inhle kakhulu ekuhambeni futhi inamandla okuhle. Uyabheka futhi uthola abavikeli abadlulile ngenxa yokusheshisa kwakhe. Ubhekwa njengomunye wabaphiko obuyingozi kakhulu emhlabeni wonke, isitayela sakhe sokudlala sidlule ukuncomeka kubaphathi, abadlali bamanje nabedlule njengoLuís Figo.
Ngaphandle kwebhola iBal uyithandwa iGoli. Uthando lwakhe lo mdlalo lumbonile ukuthi ukhokhela imali eyingozi kakhulu ukuze abe nomdwebo weSawgrass 'odumile nge-3 17th efakwe endaweni yakhe yaseWales !.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeGareth Bale Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
jeff NgoFebhuwari 28, 2018 Kwa-1: 39 am
I-Bale ingcono kakhulu !!!!!!!!!!!!!!!!!!